Kususwa iphutha le-1% elihunyushwe ngeSpanishi | Kusuka kuLinux
Kususwa iphutha le-1% elihunyushwe ngeSpanishi
Kususwa inganekwane engu-1% i-athikili ebhalwe ngu UCainlyn Martin futhi ishicilelwe ngumshicileli U-O'Reilly ngo-2010 nalapho ngokunembile umbhali ebeka izizathu zokuthi kungani ebona ukuthi akulona iqiniso ukuthi i- Linux kumasistimu wedeskithophu yi-1% kuphela.
Ukuqeda inkoleloze ye-1%
por UCainlyn Martin, ngo-2009
Ngokusobala cishe nsuku zonke othile ovela kwabezindaba bezobuchwepheshe, noma ophawula esithangamini, uqinisekisa ukuthi ukwamukelwa kweLinux emakethe yedeskithophu (kufaka phakathi ama-laptops) akubalulekile. Inombolo evelayo icishe ibe ngu-1%. Lezi zimangalo ziye zanxuswa ngabameli abathile bokwamukelwa kwe-Linux. Yomibili le mibono, yokuthi imakethe yeLinux ayibalulekile, nokuthi eye-1%, imane ingamanga, futhi ibineminyaka eminingi.
Isabelo semakethe seLinux asincane. I-Linux ne-UNIX babe nesabelo esiningi embonini yeseva isikhathi esingaphezu kweminyaka eyishumi. I-Linux incintisana kakhulu namadivayisi ashumekiwe. Ibuye yenze intuthuko enkulu ezimakethe zabathengi nezamabhizinisi, kufaka phakathi ama-laptops, izincwadi zokubhalela kanye nama-netbook.
Ake siqale ngama-netbook, indawo lapho iLinux yenze okufakiwe okukhulu kakhulu. Ngokuya nge-ABI Research, iLinux ibinama-32% emakethe ye-netbook ngo-2009, yize bekungenakwenzeka ukuthola ezitolo ezisezingeni eliphezulu. Le nombolo ayifaki amasistimu athengiswa nge-boot ebili, lapho iWindows ibhekwa njengohlelo oluzenzakalelayo lokusebenza.
UDell ubike ukuthi cishe ingxenye yesithathu yokuthengiswa kwayo kwe-netbook ngo-2009 kwakuyizinhlelo ezine-Ubuntu ezifakwe kuqala. Imibiko yakamuva yokuthi besingasekho isidingo seLinux kuma-netbook, nokuthi uDell useyichithile iLinux, kutholakale kungamanga. empeleni, uDell njengamanje unikeza ama-laptops we-Ubuntu nama-desktops, ngaphezu kwe-Inspiron Mini 10n.
Zisho ukuthini izinombolo ze-netbook emibhalweni yokuthengisa yomhlaba wonke maqondana nedeskithophu ne-laptop? Ngokusho kweForrester Research, ama-netbook abengu-18% wesamba sokuthengiswa kwedeskithophu / ilaptop ngonyaka odlule. Uma senza izibalo, sizobona ukuthi kuma-netbook nje kuphela, iLinux yathatha cishe ama-6% emakethe ngo-2009. Ukuze sifinyelele enombolweni ephelele, kuzofanele sengeze ama-laptops amakhulu kanye nama-desktops avela ezinkampanini ezinjengeDell, HP (umugqa webhizinisi labo), futhi njengabathengisi abancane.
Ukuqinisekiswa okwengeziwe kokukhula kweLinux emakethe kwavela emthonjeni ongalindelekile: Isikhulu esiphezulu seMicrosoft uSteve Ballmer. Usebenzisa isilayidi ukukhombisa imakethe ye-OS, uBallmer ukhombise ucezu lweLinux olukhudlwana kunolo lweMacOS. Akekho umuntu obheka i-Apple njengengabalulekile, kanjalo neLinux. Ngokwengxenye, nakhu okushiwo nguMnu Ballmer ngeLinux kwideskithophu kanye nomncintiswano weWindows:
"I-Linux ne-Apple, njengoba ubona kusilayidi, ngokuqinisekile bandise isabelo sabo."
“Ngicabanga ukuthi kuye ngokuthi uyibuka kanjani, mhlawumbe i-Apple inyuse isabelo sayo semakethe ngonyaka odlule, ngephuzu noma ngaphezulu. Iphuzu elilodwa lesabelo semakethe ngenombolo engaphezu kwezigidi ezingama-300 liyathandeka. Kuyisabelo semakethe esithokozisayo, noma kungenasidingo njengoba abantu becabanga, kepha sigxile kakhulu ku-Apple neLinux njengabancintisana nabo. "
Ngabe ukhona okholelwa ukuthi iMicrosoft izobona iLinux njengomncintiswano omkhulu, uma ifinyelela kuphela ku-1% wemakethe? Akubonakali kungokoqobo impela, akunjalo? Zonke izibalo engizibalile kuze kube manje zimelela ukuthengiswa kwezinhlelo ezifakwe ngaphambilini ngohlelo olunikeziwe, kungaba yiWindows, iMac noma iLinux. Azimele ukusetshenziswa kwangempela. Uma uya esitolo, thenga isistimu yeWindows, shanela i-hard drive yakho bese ufaka i-Linux, isabalwa njengohlelo lwe-Windows, hhayi iLinux, lwezibalo.
Ivelaphi i-1% ngaleso sikhathi? Kunemithombo emibili, imininingwane emidala kakhulu, namabala wewebhu. Inkinga yokusebenzisa izibali zewebhu ukuhlola nokuqinisekisa isheya lemakethe ukuthi ngokuvamile zifaka kuphela amawebhusayithi akhokhele ukubalwa. Lokho kuqinisekisa ukuthi iWindows izonqotshwa ngokweqile. I-Ars technica muva nje ikhombise ukuthi kungenzeka kanjani iphutha elikhulu endabeni yamasheya emakethe yesiphequluli. Bathola ukuthi i-IE yayingaphezu kuka-60%, iFirefox ingaphansi nje kwama-23%, ne-Chrome ingaphezu kuka-8%. Amaphesenti esiza se-Ars technica ayehluke ngokuphelele, iFirefox ingu-38%, i-Chrome ingama-22%, kanti i-IE ingowesine ekude ngo-16.63%. Isizathu salokhu kungqubuzana kusobala: I-technical Ars ithambekele ekubeni nabafundi abaningi bezobuchwepheshe, abazi kangcono izindaba zokuphepha ze-IE, futhi bathambekele ekusebenziseni iLinux noma iMacOS. Ngokufanayo, amasayithi amaningi we-Linux awakhokhi ukuze abalwe yizinkampani zokubala iwebhu, enza izinombolo zilinganiselwe esikhundleni seWindows.
Ngakho-ke siyini isabelo sangempela semakethe se-Linux kuma-desktops? Ukulinganiselwa okuhle kakhulu kokuthengiswa kwamanje kungu-8%, okubeka i-Linux ngemuva, noma ihlanganiswe ne-MacOS. Lokhu i-8% ihumushela ezinhlelweni eziyizigidi ezingama-24 ngonyaka ezithengiswa nge-Linux efakwe kuqala. Ama-akhawunti we-Windows okungenani angama-80% emakethe, futhi angumbuso wangempela. Kodwa-ke, kube khona ukuguguleka okuqhubekayo kwalesi simo sobukhosi.
Uma sikhuluma ngokusetshenziswa kwangempela, ayikho indlela yokuthola umbono oqondile.Umsebenzi wokuqagela olinganisiwe uzobeka i-Linux cishe ku-10%, noma nge-MacOS. Kube kude kakhulu kuye ku-1%, futhi akubalulekile neze.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-GNU / Linux » Kususwa iphutha le-1% elihunyushwe ngeSpanishi
I-athikili enhle kakhulu, noma ngingathanda ukwazi ukuthi zinjani izibalo njengamanje ngo-2012 hehe 😀
Yize uDell ethengisa amakhompyutha aneLinux, mangaki awo asasebenzisa iLinux? Futhi into efanayo yenzeka ngenye indlela ezungeze (ngeyami kwafika iWindows Vista, ngafaka iLinux, ngashintsha iVista ye-XP futhi cishe iminyaka eyi-2 kuphela iLinux)
Akunakwenzeka ukwazi ngokuqinisekile ukuthi bangaki abasebenzisi beLinux, Windows, Mac, njll. Emhlabeni, futhi ngiqonde kuphela amakhompyutha (ezinye izinto kungamaselula noma ama-super computer)
A, kwenzeka kimi.
Angikwazi ukufaka iHumanOS, angazi noma yingoba ithola ukuthi ngixhuma eSpain
Ngeshwa i-HumanOS itholakala kuphela kwi-intranet kazwelonke yaseCuba 🙁
Kuyisayithi langaphakathi laseCuba, abavumeli ukuba baye ku-inthanethi 🙁
Thina (AbakwaLinux) sizimisele kakhulu ukubasiza, sibanikeze ukusingathwa ukuze babonakale emhlabeni wonke, uma befuna bazi ukuthi bangaxhumana kanjani nathi 🙂
Ngangisondele ukubuza into efanayo, evela eBelgium nawe awukwazi. Manje sesiyazi ukuthi kungani 🙁
Yebo kuliqiniso lelo, kepha umuntu okhetha ukuthenga iDell ene-Linux efakwe kuqala unamathuba amaningi okuthi ayigcine njengohlelo lwayo lokusebenza.
Futhi kulokhu uqinisile, kepha kulabo izibalo ezokuthengiswa kwemishini ene-OS efakwe ngaphambili
Kwakusobala ukuthi u-1% unamanga. Uma lezi zibalo zenziwa yimakethe udinga ukuhambisana nokuthengisa kwakho nezindlela zakho. Ngale kwale mibuzo, ngibona ngokusobala ukuthi siyisizukulwane esinonembeza nokuthi izingane zethu, kuleli cala elithile, zizoholela kwi-GNU / Linux ekugxileni kwe-20 noma i-30% yemakethe, bese isetshenziswa kakhulu. Umbuzo uthi ngabe ubuchwepheshe bomzimba njengoba sazi ukuthi buzoqhubeka yini nokusetshenziswa ... kepha ifilosofi ye-GNU kanye ne-copyleft yayo izobekezelela abanye babahleli noma onjiniyela kuze kube phakade ngoba iyifilosofi yemvelo.
Lapho sicabanga ngempilo, hhayi impilo yethu kuphela, sizoyeka ukwenza amalungelo obunikazi obunemininingwane nemibono.
Nginobufakazi obuthembekile ekugcineni bokuphika i-1% yezinganekwane eziningi, uma kungathiwa kuphakeme, kepha akucaci.
Endlini yami kunamakhompyutha ama-3 eze neWindows futhi eminyakeni eyi-2 ~ 3 edlule bane-Linux. Kwenzeka into efanayo nasendlini yabangane bami engiye ngakujabulela ukufaka iLinux.
Kwakucace bha ukuthi le-1% yayingamanga, ngangilokhu ngiyibona isetshenziswa kabi yize ngangingayekanga ukucabanga ukuthi kungani, ngemuva kokufunda le ndatshana sengivele nginakho konke kucace bha, ngiyabonga! 😀
I-PS: ILinux izoqhubeka nokukhuphuka lelo phesenti, ngiyaqiniseka ngakho.
Siyabonga ngokwabelana ngombhalo. Izibali zewebhu azinikezi idatha ethembekile kepha akumnandi ukubona lawo maphesenti.
Uma sino-8% wemakethe, kungani-ke sisenawo ama-ati XD ASI shits driver !!!? Wozani…, ngicabanga kakhulu phakathi kuka-2 no-4.
8% ukuthengisa ngonyaka wendatshana. Ngokusho kukaCainlyn Martin, wayene-10% yemakethe (ukuqagela okumsulwa).
Angicabangi ukuthi nami nginakho okungako, uma okuningi kuzoba no-5, okungenani. Futhi lokho kungangimangaza futhi, ngoba lapho wehla ngomgwaqo kufanele ubone umuntu osebenzisa iLinux ngezikhathi ezithile futhi lokho akwenzeki (kimi, okungahambelani). Engikubonayo kulezi zingxenye zomhlaba kune-OSX eningi, okuningi.
Kunoma ikuphi, ngo-10% ngingaweneliseka kakhulu, ngalokho kwanele ukuba nabashayeli abahloniphekile 🙂
Kwesinye isikhathi ngicabanga nokuthi baningi bethu, lapho-ke lapho ngikhuluma nabanye abantu noma eyunivesithi, cishe akekho umuntu osebenzisa iLinux, ngiwela ngokoqobo.
Kwesinye isikhathi abaningi bathi basebenzisa i-Linux kanti empeleni bayisebenzisile nje kuphela
Le 1% ingithakazelisa kancane hhayi lutho. Kufanele uvumele konke kugeleze njengamanzi nge-linux com namuhla. Kunoma ikuphi, bengilokhu ngikholelwa ukuthi iphesenti elilodwa linamanga futhi lisongela ngaphezu kweBill & Melinda Gates Foundation
Kutholakalela ukulanda iBluefish 2.2.2
Njengoba iLinux isivele isekela i-Chakra Linux kumazwana abekiwe